Amathuba emkhakheni wokushicilela imisebenzi yezikole - Bayede News
by nguZodwa Zondi
UZodwa Zondi ungumshicileli omkhulu wezilimi zendabuko kwaShuter and Shooter
UbuKhrestu bathengwa ngegazi lababephikisa hhayi leMvana
Sisahlezi lapha endabeni yamathuba emkhakheni wokushicilela. Njengoba izwe libhekene nokwentuleka kwemisebenzi nezinga lobubha lindlondlobala, thina bakwaShuter and Shooter sibona kukuhle ukuthi ukucijisana ngamathuba emisebenzi kube undabizekwayo.
Sizokhumbula ukuthi owesibhuda owathela uJesu ngamafutha embhalweni ongcwele, uJesu wathi indaba yakhe mayixoxwe njalo njalo. Ngakho kungathi njalo lapho kuhlanganwa, izigcawu ngezigcawu kungathamundwa le ndaba yokushiyelana ithunga ngamathuba emisebenzi.
Sizobheka ngezindlela ezimbili okuwuthi: Lapho uqoma ukuthi uqashwe yizinkampani ezizimele. Okunye, kulapho uvele usungule nje eyakho inkampani bese uvulela nabanye amathuba okuqashwa, sebeqashwa khona la kweyakho inkampani. Asiqale-ke ngokokuqala.
Ukuqashwa yinkampani ezimele
Sizokubeka kucace kuthi bha ukuthi uma uqashiwe uzothuthukisa imigomo nenhloso yaleyo nkampani. Lokhu sikwenza sigijima emngceleni esibekelwe wona, okungukuba umshicileli njengoba sikhuluma ngako nje lapha. Sizokhumbula ukuthi engosini edlulile sikhulumile ngemikhakha yokushicilela ehlukahlukene.
Kule ngosi sizogxila emkhakheni wokushicilela amabhuku afundwa ezikoleni njengoba inkampani yakwaShuter and Shooter ibhekene ngqo nokushicilela imibhalo yezikole. Kulo mkhakha umshicileli unikezwa izifundo okuyizona azozishicilela.
Imvamisa-ke kubhekwa ukuthi yena ugogode ngamuphi umkhakha, lapha sibala imikhakha efana nesayensi kanye nezibalo, izifundo zokuhweba, izifundo zobuchwepheshe noma izifundo zobuntu.
Sizokhumbula ukuthi uma sishicilelela izikole, silawulwa ukuguquguquka kwekharikhulamu ezikoleni. Indaba-ke isuka lapho kuphuma ikharikhulamu entsha.
Umshicileli uyobe eseqala ngokucubungula, aze ayiqonde kahle ikharikhulamu ukuthi ikhuluma ngani. Uyothi angayiqonda, abe esehlwaya ababhali abakulungele ukubhalela le kharikhulamu eseyiphumile.
Singeze saphindela emuva singemgqigqo, bese sesikhulumile ngamaqophela adlula kuwo umshicileli uma esethole ikharikhulamu nababhali abafanele.
Umshicileli kubalulekile ukuthi abe nekhono elinzulu kwezokuhleleka. Ngenxa yokuthi kufika imisebenzi eminingi, evela kubantu abehlukene, kudingeka umshicileli oqaphelisisayo. Umshicileli usebenza nabahleli, abadwebi, amadizayna nabacubunguli.
Bonke laba bantu bamenejwa nguye umshicileli. Uthi egade ukuthi bangasali esikhathini esibekiwe, aphinde aqaphele futhi akhuthaze ubunyonico ekwenziweni komsebenzi. Phela umsebenzi ongekho ezingeni, uzoba isithombe somshicileli lapho abebebambe iqhaza bengasekho. Ibhuku liyisithombe somshicileli.
ULinda Bukhosini – Umzwilili weTheku
Usebenzisa amaqhinga azomlekelela ukuthi konke kwenzeke ngesikhathi esifanele futhi kube sezingeni eliphakeme. Uyothi ehlola umsebenzi owenziwe omunye, abe ebheka ngeso lokuthi ozothatha lowo msebenzi aqhubeke nawo akazukuba yini nezingqinamba.
Phela umsebenzi wokushicilela uyibhande, uma owokuqala enze ubudlabha okusho ukuthi olandelayo useyothwala isiphambano sokuqala ngokulungisa lobo budlabha.
Ngizokwenza isibonelo nje: uma umbhali esebenzise ulimi ngendlela engavumelani noma engefani, lokho kuyothwalisa umhleli ngokuthi ahambe elungisa lawo magama asetshenziswe angefana.
Uma uthola ukuthi endabeni umbhali ubesebenzisa igama elithi, ‘emgwaqweni’, kwezinye izindawo umuzwe esethi ‘emgaqweni’ noma ‘emgwaqeni’, umhleli useyolokhu elifuna yonke indawo leli gama, ehamba elilungisa ukuze lifane yonke indawo.
Bekuyisibonelo nje lesi, sewungazicabangela nawe okunye okufana naloku oke uhlangabezane nako. Ake siyibambe lapha, siyoqhubeka kwelilandelayo.
nguZodwa Zondi Feb 26, 2021